တစ်နေ့တခြားအရုပ်လေးတစ်ရုပ်လိုချစ်ဖို့ကောင်းလာတဲ့ သမီးလေးရဲ့သုံးလပြည့်တဲ့နေ့လေးမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ဆုတောင်းစကားဆိုလိုက်တဲ့ ခင်လွှမ်း – The News Post
တစ်နေ့တခြားအရုပ်လေးတစ်ရုပ်လိုချစ်ဖို့ကောင်းလာတဲ့ သမီးလေးရဲ့သုံးလပြည့်တဲ့နေ့လေးမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ဆုတောင်းစကားဆိုလိုက်တဲ့ ခင်လွှမ်း
September 15, 2021 By thu han soe Celebrity
ခင်လွှမ်းကတော့ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုကို အခိုင်အမာစိုက်ထူထားနိုင်တာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေလည်းတစ်ခဲနက်ရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါ့အပြင် သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် အားလုံးက ချစ်ခင် အားကျနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
ခင်ပွန်းသည် စည်ဖြိုးကလည်း ဇနီးသည်အပေါ် သဘောထားကြီးပြီး နားလည်ဂရုစိုက်သူဖြစ်လို့ ခင်လွှမ်းရဲ့ ဘဝလေးက ပြီးပြည့်စုံပြီး အေးချမ်းပါတယ်နော်။ ဒါ့အပြင် ယောက္ခမဖြစ်သူကလည်း သမီးအရင်းလေးလို ဂရုစိုက်ပြီး သည်းသည်းလှုပ်အချစ်ပိုတာဖြစ်လို့ ခင်လွှမ်းကို မိန်းကလေးတိုင်း အားကျနေရတာပါ ။
ခုဆိုရင် ချစ်စရာ သမီးလေးပါသူတို့ ဘဝထဲကိုရောက်ရှိလာပီဖြစ်လို့ ပိုလို့တောင် ပျော်ရွှင်နေကြတာပါ ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရွယ်ရောက်လာပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ သမီးလေးက အခုဆိုရင် သုံးလပြည့်သွားပြီလို့လည်းသိရပါတယ် ။ သမီးလေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ အတူ ” Happy3month old baby shandra . Mom and dad love you lots ” ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
Photo – Khin Hlwan
ခငျလှမျးကတော့ အနုပညာလောကမှာ နရောတဈခုကို အခိုငျအမာစိုကျထူထားနိုငျတာဖွဈပွီး အောငျမွငျမှုတှလေညျးတဈခဲနကျရရှိထားတဲ့ သူတဈယောကျပါ။ ဒါ့အပွငျ သာယာတဲ့ အိမျထောငျရေးလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ အားလုံးက ခဈြခငျ အားကနြရေတာလညျးဖွဈပါတယျ ။
ခငျပှနျးသညျ စညျဖွိုးကလညျး ဇနီးသညျအပျေါ သဘောထားကွီးပွီး နားလညျဂရုစိုကျသူဖွဈလို့ ခငျလှမျးရဲ့ ဘဝလေးက ပွီးပွညျ့စုံပွီး အေးခမျြးပါတယျနျော။ ဒါ့အပွငျ ယောက်ခမဖွဈသူကလညျး သမီးအရငျးလေးလို ဂရုစိုကျပွီး သညျးသညျးလှုပျအခဈြပိုတာဖွဈလို့ ခငျလှမျးကို မိနျးကလေးတိုငျး အားကနြရေတာပါ ။
ခုဆိုရငျ ခဈြစရာ သမီးလေးပါသူတို့ ဘဝထဲကိုရောကျရှိလာပီဖွဈလို့ ပိုလို့တောငျ ပြျောရှငျနကွေတာပါ ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အရှယျရောကျလာပွီး ခဈြစရာကောငျးလှနျးနတေဲ့ သမီးလေးက အခုဆိုရငျ သုံးလပွညျ့သှားပွီလို့လညျးသိရပါတယျ ။ သမီးလေးရဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံလေးတှနေဲ့ အတူ ” Happy3month old baby shandra . Mom and dad love you lots ” ရေးသားဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။
နေမကောင်းလို့ဆေးခန်းသွားပြချင်ပေမယ့်လည်း သွားလို့မရတဲ့ အခြေအနေကြောင့် ရောဂါကိုကြိတ်မှိတ်ပြီးခံစားနေရကြောင်းရင်ဖွင့်လာတဲ့ မေ
သူမကို TV Channel တစ်ခုမှာ နေ့စဉ်မြင်တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို ပရိတ်သတ်ကြီးအားပြောပြလာတဲ့ ယဉ်လတ်